'''၀ူး . . .။ ဟူး . . .။ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏။ တော်တော် လူလည်ကျတာပဲ။ ခင်းများက နဖူးမှာ စာရေးထားပြီး အိပ်နေတာကိုး။ ရပါတယ်ဗျာ။ ဒီလိုကြေးလား။ ဒီလိုပဲပေါ့။ ကဲပါ။ နှုတ်ဆက်ဖော်ရတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။ ကျေးဇူးရှင်က ကားမောင်း တော်တော် ရက်စက်တာပဲ။ သူမငိုက်အောင် ကျုပ်က ဘေးကနေ စကားပြောပေးနေရတာလေဗျာ။ သူငိုက်ရင် တစ်ကားလုံး ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။ ဒီည ငိုက်ကို မငိုက်သေးတာ။ အိပ်မပျော်မယ့် အတူတူမို့ စိတ်နဲ့ လိုက်မှတ်နေတာလေဗျာ။ မိုင်တိုင်အမှတ် 111/1။ မြန်မာစံတော်ချိန် am 1.11။ 100km/h။ ဒါလေးများ . . .။ စိတ်လောက် မမြန်သေးပါဘူးဗျာ။ စိတ်မရှိပါနဲ့ . . .။ ကျုပ်တို့ Tool Plazaက ငါးတန်အောက်ဆိုရင် လူရာမသွင်းပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးရှင် ဒီကောင်လေး စောစောစီးစီး ဘာတွေအော်နေတာလဲဟ။ အဲဒါ ပြေတီဦးပဲ။ ဣန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ယောက်ျားလေဗျာ။ မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ ရံပုံငွေရှာ နေရှာတာ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ လုပ်ရှာပေသားပဲ။ သာဓုခေါ်ရမှာတောင် ရှက်သလိုလို အားနားသလိုလိုပဲဗျာ။ အားနာတယ်ဆိုတာ သူတို့အလုပ် မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဘနဖူး သိုက်တူးမဲ့ကောင်တွေ။ လမ်းဖောက်တုန်းက ကျုပ်တို့အားနဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါဗျာ။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပေါ့။ အခု ကျုပ်တို့လမ်းလျှောက်တော့ အခတောင်းသတဲ့ဗျာ။ ဘောင်ထဲက အလုပ်လုပ်တာဗျ။ မကျေနပ်ရင် ခင်များ ကြိုက်တဲ့ဆီသွား။ ဆန္ဒရှိသလို လုပ်ပါ။ ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်ဆန္ဒတွေနဲ့ကျုပ် ဖတ်ဖတ်မောနေပြီဗျို့ ။ ကျုပ်ဆင်ခြေတွေက ကျုပ်ကို ပြန်ထောင်တာလည်း တော်တော် ခံရတယ်ဗျို့ ။ မထူးပါဘူးဗျာ။ အရင်းရှင်ဝါဒ၊ ကံကြွေးချဝါဒ၊ မေတ္တာဝါဒ။ ထားပါတော့ဗျာ။ ဘယ်ဝါဒကိုပဲ ကျင့်သုံးကျင့်သုံး ခံတဲ့လူကတော့ ခံရမှာပဲဗျ။ ဒီကိစ္စ ဆရာတော်တွေ ခရေစေ့တွင်းကျ ဘယ်သိနိုင်မလဲဗျ . . .။ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာက မိုးဦးပန်းနဲ့ တူတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာ။ နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဆရာတော်တွေတောင် မေတ္တာတရားအကြောင်း မကြာခဏ ဟောကြားတော်မူနေကြတာပဲလေ။ အရှင်ဘုရား ဒီ ကြွပါဘုရား။ အိမ်သာလည်း ဒီမှာ ရှိပါတယ် ဘုရား . . .။ ဓမ္မာစရိယ မအောင်ရင် တရားမဟောရတော့ဘူးတဲ့ဘုရား . . .။ တပည့်တော် ကမ္ဘာကအေး လာတာတာပါဘုရား။ နပသပါ ဘုရား။ တရားဟော ပင့်ထားထို့ ဘုရား . . .။ လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦးမောင်ကြီးရဲ့ရွာ။ ဘုန်းကြီးက ဘုန်းကြီးပဲလေ။ တရားမနာရုံနဲ့တော့ သဒ္ဓါတရား မရှိဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူးလေ ဘုရား . . .။ အယုံအကြည် မရှိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ . . .။ တရားပွဲနားကို မကပ်တာ။ ကပ်ပါတယ် ဘုရား . . .။ ရဟန်းသံဃာ အားလုံးကို ကပ်တာပါဘုရား။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု . . .။ ပိုင်ရှင် အကြီးအကဲက သဒ္ဓါပေါက်ပြီး အမိန့်ပေးထားလို့ ထင်ပါတယ်ဘုရား . . .။ မှန်ပါ့ . . . ခေါင်းဆောင်ကောင်းမှ။ ကောင်းပါတယ် . . .။ သဘောကျတယ် . . .။ တပည့်တော်နဲ့တော့ ကိုက်တယ်။ တပည့်တော်က အအေးကြောက်တာနဲ့ အတော်ပဲ . . .။ ဆောင်းရယ်လို့ကို မရှိတာ ဘုရား။ တင်ပါ့ . . . ကျွန်း။ အီကွေတာမို့ ထင်တယ် . . .။ နေပူချင်တဲ့အချိန်ပူ။ မိုးရွာချင်တဲ့အချိန်ရွာ။ လေတိုက်တယ် . . .။ တစ်နှစ်လုံး ဒီတိုင်းပဲ။ ပူတာ များပါတယ်။ မပူနဲ့ မပူနဲ့။ တပည့်တော် မှတ်မိတယ်။ လက်မှတ်ထဲမှာ ကားနံပါတ် ရေးထားတယ်။ ဟုတ်တယ် ဘုရား။ ဒီကားပဲ။ ကြွ။ အရှင်ဘုရား အရင်ကြွ။ တပည့်တော်က ခုံနံပါတ်တစ်။ ၀င်လို့လွယ်တယ်။ နောက်မှ တက်မယ်။ တင်ပါ့ . . . လက်မှတ်ကြိုဝယ်ခိုင်းထားတာ . . .။'''
“Z z z z z . . . . .”
ပို့စ်ရေးသားသူ Ashin Acara. ရက်စွဲ Friday, December 23, 2011